Ibali loLuthando oluphakathi
Ukunyaniseka-Ubomi boBomi kwiXesha le-12 leminyaka
Wayengumfundi ocebisayo kwiYunivesithi yaseParis, onobukrakra, obandakanyekayo kunye nobumnandi. Wayekrazula abafundi njengamaqhubi emlilweni wakhe, enzima abaphathi bakhe kunye neontanga zakhe ngokubonisa imibala yeengcamango. Ingcamango yakhe engabonakaliyo yokuzithemba yayilungelelaniswa neetalente zakhe zokufunda, ukufundisa kunye neengqungquthela. Igama lakhe linguPerre Abelard.
Wayeyinto engabonakaliyo kwindwendwe ye-cathedral yaseParis: intombazana eselula, iseneminyaka yobutsha, iqhubela phambili izifundo zefilosofi ngokungenanto inqwenela ukuyithatha isigqubuthelo.
Nangona ngokuqinisekileyo wayemthanda, wayedume ngakumbi ngenxa yengqondo yakhe enxanelekileyo nokunxanelwa kolwazi kunokuba ubuhle bakhe. Igama lakhe lalinguHeloise.
Abantu ababini abangaqhelekanga kwilizwe elifanayo lezemfundo kufuneka bafumane omnye nomnye kubonakala kungenakukhunjulwa. Ukuba amazwi abo abonisa uthando abamele basinda kuthi ngamazwi abo sisipho esingaqhelekanga sembali.
Le ntlekele kufuneka ilindele ukuba ibali labo libhekiselele. 1
Ngoxa u-Abelard wambona uHeloise ngethuba elithile kwimeko yokufundela yaseParis, kwakungekho zihlandlo zentlalontle ababeza kudibana nazo. Wayehlala kunye nezifundo zakhe kunye nobomi beyunivesithi; wayephantsi kokhuselo lukaMalume uFulbert, i- canon kwi-cathedral. Bobabini baphenduka kwiindawo zokuhlala zentlalo ngokuxhamla ngokuxhamla ngokuzonwabisa kunye nefilosofi , i- theology kunye neencwadi .
Kodwa u-Abelard, ekufikelele kwiminyaka yakhe yesithathu ngaphandle kokungazi uvuyo lothando lobubele okanye lomzimba, wayegqibile ukuba wayefuna loo mava.
Waya kule khosi ngendlela yakhe eqhelekileyo:
Yayiyintombazana leyo, emva kokuba ndiqwalasele ngenyameko zonke ezo mpawu ezingenakuchukumisa abathandi, zizimisele ukudibanisa nam ndibophelelane uthando ... 2
I-Canon Fulbert yaziwa ngokunyamekela umntakwabo; Wayeqonda ukukwazi kwakhe ukufundela kwaye wayefuna imfundo engcono eyayiza kunikwa yona.
Le ndlela yayingumzila ka-Abelard wangena endlwini yakhe nokuzithemba. Ukumangalela ukugcinwa kwekhaya lakhe kwakubiza kakhulu kwaye kwaphazamisa izifundo zakhe, umphandi wayefuna ukuhamba kunye noFulbert ngenjongo yokutshintshela imali encinci kwaye, ngokubaluleke kakhulu, ukunikezela ngemfundo kuHeloise. Ngaloo nto yayingu-Abelard udumo - kungekhona nje nje ngutitshala oqaqambileyo kodwa njengomntu othembekileyo - ukuba uFulbert wamkela ngokuzimisela ekhaya lakhe waza wamnika imfundo kunye nokunyamekela komntakwabo.
Andikufanele ndibethe ngokumangaliswa ukuba uye wanikela imvana yethenda ekunakekeleni kwindoda ehlambalayo ...
Sasihlangene kuqala kwindawo yokuhlala ekhusele uthando lwethu, kwaye ke ezintliziyweni ezitshisa kunye nazo.
Ayikho indlela yokwazi izibongozo okanye iifayile ze-Abelard ezisetyenziselwa ukunyenga umfundi. U-Heloise usenokumthanda kakhulu ukususela kumzuzu abadibana nawo. Umzimba wobuntu bakhe, ingqondo yakhe ebukhali kunye nengqondo yakhe ebusweni ngokungathandabuzekiyo kubangele ukuhlanganiswa okungenakuphikiswa komfazi oselula. Wayengashumi namashumi amabini, wayengenayo into yokuba yena kunye nomalume wakhe babesetyenziselwa ngayo, kwaye wayeneminyaka elifanelekileyo ukuba abone ubukho buka-Abelard ebomini bakhe njengoko bubekwe ngu-Fate - okanye nguThixo.
Ngaphezu koko, abancinci abanamabini amabini baye bafanelana ngokufanayo njengoAbelard noHeloise. Bobabini abanomdla, bobabini abanengqiqo kakhulu, bobabini abaphathiswe ngobugcisa bokufunda, babelana ngamandla angqondo okubambalwa abalingani babo nawuphi na umdala-okanye ixesha-bafumane inhlanhla yokwazi. Nangona kunjalo kule mihla yokuqala yomnqweno omkhulu, ukufunda kwakunesibili.
Ngaphantsi kweengcamango zeso sifundo sichitha iiyure zethu kwinjabulo yothando, kwaye ukufunda kwasibekela ithuba elifihlakeleyo elithandayo. Intetho yethu yayinothando ngakumbi kuneencwadi ezivulekileyo phambi kwethu; Ukumanga kwethu kukhulu kakhulu kumagama ethu anengqiqo.
Nangona kunjalo iinjongo zokuqala ze-Abelard ziye zadlulelwa, ngokukhawuleza wayexatyiswa yimvakalelo yakhe ngeHloise. Ukufumanisa iimeko zakhe ezinomdla ezakuba zithandekayo, amandla akhe ekufundeni avulekileyo, wazisa iintetho ezingenakukhuthazwa, kunye nezibongo zakhe ngoku zijolise ekuthandweni.
Kungekudala ngaphambi kokuba abafundi bakhe bathathe into eyayiza kuye, kwaye amahemuhemu ashushumbisa iParis ebudlelwaneni obufudumeleyo.
I-Canon Fulbert kuphela yayingabonakali ukuba yintando eyenzeka phantsi kwayo. Ukungazi kwakhe kwaxhaswa yintembelo yakhe kumntwana omthandayo, kwaye umfundi wayemthanda. I-Whispers kungenzeka ifinyelele ezindlebeni zakhe, kodwa ukuba kunjalo abazange bafikelele entliziyweni yakhe.
Owu, lukhulu kangakanani intlungu kaMalume xa efunda inyaniso, kwaye indlela enzima ngayo intlungu yabathandi xa sinyanzeliswa ukuba sahlukane!
Oko kwenzekayo akucaci kakuhle, kodwa kunengqiqo ukucinga ukuba uFulbert wangena kumntakwabo kunye nombhodi wakhe ngomzuzu wangasese. Wayegxeke amahemuhemu kwaye wayekholelwa ekuziphatheni kwawo okuhle; mhlawumbi kwakukho ukulwa ngokuthe ngqo kunye nenyaniso eyamchaphazela kakhulu. Ngoku, ubungakanani bakhe bushushu ubuncinane bufana nomlinganiselo wethemba awayebekwe kuzo zombini.
Kodwa ukuhlukanisa ngokwenyama isibini esingazange sitshise ilangabi luthando lwabo komnye; okuphikisanayo:
Ukutshiswa kwemizimba yethu kusebenza kodwa ukudibanisa imiphefumlo yethu kunye; ubukhulu bothando olwenqatshelwe kuthi lusisigxina kunanini ngaphambili.
Kungekudala emva kokuba bahlukane, u-Heloise wathola umyalezo ku-Abelard: wayekhulelwe. Ngethuba elilandelayo, xa uFulbert engekho ekhaya, lo mbhangqwane wabaleka kwintsapho ka-Abelard, apho uHeloise wayeza kuhlala khona de unyana wakhe azalwe. Umthandi wakhe wabuyela eParis, kodwa ukwesaba okanye ukungahambi kuye kwamlondoloza ekuzameni ukuphulukana nomalume wakhe ngeenyanga eziliqela.
Isisombululo sibonakala silula kuthi ngoku, kwaye bekuya kuba lula kwiibini ezitshatileyo emva koko: umtshato. Kodwa, nangona bekungaziwa kubafundi beyunivesithi ukutshata, umfazi kunye nosapho kunokuba ngumqobo omkhulu kumsebenzi wokufunda. IiYunivesithi zazinje iinkqubo ezintsha ezivela kwizikolo zeKathhedral, kwaye enye eParis yayidume ngokuba yimfundiso yayo yenkolo. Ithemba eliqaqambileyo elinde ukuba iBelard ihlale ecaweni; wayeya kulahlekelwa ngumsebenzi ophezulu ngokuthatha umfazi.
Nangona engazange avume ukuba iingcamango ezinjalo zimbambe ekucebiseni umtshato, ukuba zibandakanywa phakathi kokucinga kwakhe kubonakala kucacile xa echaza isipho sakhe kuFulbert:
... ukwenzela ukuba enze utshintsho nangaphezulu kwethemba lakhe elidlulileyo, ndamcela ukuba nditshatile naye endikukhohlileyo, enikezela kuphela into enokugcinwa eyimfihlo, ukwenzela ukuba ndingabi nasobalahleko. Ngaloo nto wavuya ngokuvuma ...
Kodwa uHeloise yinto enye.
Ukuba umfazi osemncinci othandana naye kufuneka afune ukutshata noyise womntwana wakhe angabonakala ephazamisayo, kodwa u-Heloise wayenesizathu esichukumisayo. Wayesazi kakuhle amathuba a-Abelard ebeya kudlula ukuba wayezibophelele kwintsapho. Wayephikisana nomsebenzi wakhe; wayephikisana nezifundo zakhe; Wayephikisa ukuba loo mzekelo ayiyi kubakholisa umalume wakhe ngokwenene. Waye waxela inhlonipho:
... kuya kuba mnandi kakhulu ukuba kubizwe ngokuba yinkosikazi yam kunokuba aziwa ngumfazi wam; Hayi, nokuba, oku kuya kuba nozuko kwam. Kwimeko enjalo, wathi, uthando lwedwa luya kumbamba kuye, kwaye amandla omtshato ayengasithinteli.
Kodwa umthandi wakhe akayi kukhutshwa. Kungekudala emva kokuba unyana wabo u-Astrolabe azalwe, bamshiya ekunyamekeleni kwintsapho ka-Abelard babuyela eParis ukuba batshata ngasese, kunye noFulbert phakathi kwamangqina ambalwa. Baye bahlukana ngokukhawuleza emva koko, bebonana kuphela kwiindawo ezingabonakaliyo zangasese, ukuze balondoloze inkolelo yokuba babengabandakanyeka.
U-Heloise wayelungile xa wayephikisana ukuba umalume wakhe akayi kuyaneliswa ngumtshato oyimfihlo. Nangona wayemthembise ukuqonda kwakhe, ukuzikhukhumeza kwakhe kwakungamvumeli ukuba athule ngezinto ezenzekayo. Ukulimala kwaba yindawo kawonkewonke; ukuhlaziywa kwayo kufuneka kubekwe luluntu. Wavumela ilizwi lomanyano womtshato ukufumana.
Xa umntakwabo waphika umtshato, wamxabela.
Ukuze agcine uHloise ephephile, umyeni wakhe wamvusa waya kwi-convent e-Argenteuil, apho wayefunde khona njengomntwana. Le nto yodwa inokuba yanele ukuyigcina ingqumbo kamalume wakhe, kodwa u-Abelard waya kwelinye inyathelo: wacela ukuba agqoke iimpahla zendwendwe, ngaphandle kwesikhuselo esabonisa ukuthatha izibhambathiso. Oku kuye kwaba yiphutha elikhulu.
Xa umalume wakhe nabazalwana bakhe beva oku, baqiniseke ukuba ngoku ndawadlala ngokuphangaleleyo kwaye ndaye ndawachitha ngokupheleleyo ngonaphakade kwiHloise ngokumphoqa ukuba abe nun.
UFulbert wathukuthela, waza walungisa ukuphindezela.
Kwenzeke ngehora lekusasa xa isazi salala, singazi. Ababini bakhe bakwamkela iziphoso zokuvumela abahlaseli ukuba baye ekhaya. Ijehliso abaye bayityelela kwiintshaba zabo kwakuyingozi kwaye ihlazo njengoko kwakunzima:
... kuba banqumla loo malungu omzimba wam endiyenzile oko kwakuyimbangela yosizi lwabo.
Ngentsasa, kwakubonakala sengathi yonke iParis yayibuthene ukuva iindaba. Abahlaseli babini ba-Abelard babanjwe kwaye batyhutyelwa ingxaki efanayo, kodwa akukho ntlawulo eyayibuyisela kumfundi ukuba wayelahlekelwe yintoni. Isifilosofi esicacisayo, imbongi, kunye notitshala owayeseqhelwe ngokuba neetalente zakhe ngoku wayenalo udumo lwendlela eyahlukileyo.
Ndingaba njani ndiphinde ndibeke intloko yam phakathi kwabantu, xa yonke iminwe ifanele ikhonkxwe kum ukugculelwa, zonke iilwimi zithetha ihlazo lam, kwaye xa ndimele ndibe ngumbukiso omkhulu emehlweni onke?
Nangona wayengakaze acinge ukuba ngumonkethi, u-Abelard waphendukela kwi-cloister ngoku. Ubomi bokuzimelela, ozinikezele kuThixo, yindlela yokuphela yokuzikhukhumeza kwakhe kuya kumvumela. Waphendukela kwi-Dominican order kwaye wangena kwi-abbey yaseSt. Denis.
Kodwa ngaphambi kokuba enze njalo, waqinisekisa umfazi ukuba athathe isigqubuthelo. Abahlobo bakhe bamncenga ukuba acinge ngokuphelisa umtshato wakhe aze abuyele kwilizwe langaphandle: emva koko, wayengasakwazi ukuba ngumyeni wakhe ngokomzimba, kwaye ukuchithwa kwakuya kuba lula ukuyifumana. Wayesemncinci, eselungileyo, kwaye enobungangamsha kunanini ngaphambili; ihlabathi libonelela ngekamva eliza kubakho.
Kodwa u-Heloise wenza njengoko u-Abelard ambiza - kungekhona nangomnye umthando wobomi bendwendwe, okanye ngenxa yothando lukaThixo, kodwa ngenxa yothando lukaAbelard.
Uthando Lu nya mezela
Kuza kunzima ukucinga ukuba uthando lwabo ngomnye lungahlala luhlukane kunye nokulimala kuka-Abelard. Enyanisweni, ekuboneni ukuba umfazi wakhe angena kwi-convent, ifilosofi ibonakala ibeke yonke into emva kwayo kwaye yazinikela ekubhaliseni nasekufundiseni. Ku-Abelard, kwaye ngokuqinisekileyo kubo bonke abafunda ifilosofi ngexesha lakhe, ibali lomthando laliyiyona ndlela ehamba phambili kumsebenzi wakhe, impembelelo eyabangela ukutshintsha kwinjongo yakhe kwizinto ezisemgangathweni ukuya kwisayensi.
Kodwa uHeloise, loo nto yayiyintlanganiso ebomini ebomini bakhe, kwaye uPeter Abelard wayehlala engqondweni yakhe.
Ifilosofi yaqhubeka ikhathalela umfazi wayo kwaye yabona ukhuseleko lwakhe. Xa u-Argenteuil efunyanwa ngumnye wabamncintisana naye kwaye u-Heloise, ngoku u-prioress, waphendulwa kunye namanye amantombazana, u-Abelard wahlela ukuba abafazi abafudukekileyo bahlale kwi-abbey yePacaclete, awayeyifumene. Kwaye emva kwexesha elithile lidlulile, kwaye amanxeba emzimbeni nangokomzwelo aye aqala ukuphilisa, aphinde ahlalisana, nakuba ahluke kakhulu kunabo ababewaziyo kwihlabathi lehlabathi.
Ngenxa yakhe, uHeloise akazange avumele ukuba iimvakalelo zakhe zibe yi-Abelard. Wayesoloko evulekile kwaye uthembekile ngothando lwakhe oluhlala kumntu ongenakube ngumyeni wakhe. Wayemkhathaza ngenxa yeengoma, intshumayelo, isikhokelo kunye nomyalelo wokumyalelo wakhe, kwaye ngokwenza njalo waqhubeka esebenza emsebenzini we-abbey-kwaye wagcina ukuhlala kwakhe engqondweni yakhe.
Ngokubhekiselele ku-Abelard, wayenenkxaso kunye nokukhuthazwa kwelinye labesifazane abaqaqambileyo kumaxesha akhe ukuze amncede ahambe ngendlela yokukhohlisa yezobupolitika zekhulu le-12. Iintalente zakhe zokucinga, ukuqhubeka nomdla kwifilosofi yelizwe, nokuzithemba kwakhe ngokupheleleyo kwiSibhalo kwakungamfumananga abazalwana kwiCawa, kwaye umsebenzi wakhe wonke wawuphawulwa ngokuphikisana nabanye abafundisayo. WayenguHloise, omnye unokuthi, ngubani owamnceda ukuba angqinelane nomoya wakhe ngokomoya; kwaye yayinguHloise yena ebhekise kuyo umsebenzi wakhe obalulekileyo wokholo, oqalayo:
U-Heloise, udadewethu, xa ndandithanda kakhulu ehlabathini, nanamhlanje kunene kuYesu Kristu ... 3
Nangona imizimba yabo yayingeke isabumbene, imiphefumlo yabo yaqhubeka ikwabelana ngolwazi, lwengqondo nolwasemoyeni.
Emva kokufa kwakhe uHeloise wayenomzimba ka-Abelard owazisa kwiParaclete, apho wangcwatyelwa khona ngasemva kwakhe. Balala ndawonye, ​​ekubakho kuphela ukuphela kwendaba yothando yesikhokelo.
Incwadi yakho ebhaliweyo kumhlobo wakhe induduzo, intanda, ndandifudelwa kungekudala. Xa ndibona ngokukhawuleza kwisihloko esasiyakho, ndaqala ukuyifunda ngokugqithiseleyo ukuba ndiyifunde kakhulu ukuba umbhali wayeyithande kakhulu, ukuze ndinokuhlaziywa ngamagama akhe njengokuba ngumfanekiso wakhe ondilahlekile ... 4
Ibali lika-Abelard no-Heloise lingahle lilahleke kwizizukulwana eziza kwenzeka kungekhona kwiileta ezazisinda. Inkqubo yeziganeko ezazithandana nazo zachazwa ngokungaqhelekanga kwileta ebhaliweyo u-Abelard wabhala, njenge- Historia Calamitatum, okanye "Ibali leMiphumo yam." Injongo yakhe ngokubhala loo ncwadi yayinokumduduza umhlobo wakhe ngokumxelela, ngokwenene, "Ucinga ukuba unengxaki? Mamela kule ..."
I- Historia Calamitatum yayisasazeka kwaye ikopishwe, njengoko ngezinye iileta kwakukho ngaloo mihla. Kukho isikolo sokucinga ukuba u-Abelard unesisusa esiphezulu ekubunjweni kwayo: ukubiza ingqalelo kuye kwaye ugcine umsebenzi wakhe kunye nenhlakanipho yakhe yokungena ekugqibeleni. Ukuba oko kwakunjalo, ifilosofi, nangona esenokuba nethemba kwizinto zakhe zokuzikhukhumeza, wabonisa ukunyaniseka ngokukhawuleza kunye nokuzimisela ukuwamkela uxanduva malunga neziphumo ezimbi eziveliswa yizinto ezimbi kunye nokuzingca.
Nangona iinjongo zakhe zokubhalela le leta, ikopi ekugqibeleni yawela ezandleni zikaHloise. Kwakule nto uthabatha ithuba lokuthintana no-Abelard ngokuthe ngqo, kunye neenkcukacha ezibanzi ezivela apho uhlobo lwabo bobudlelwane bobudlelwane babo buya kufumana khona.
Ubunyani beetalela ezithi zibhalwa nguHloise uye wabuza. Ngolunye ulo mcimbi, jonga i- Mediev-l Ingxoxo yee-Heloise's Letters ku-Abelard , eqokelelwe kwi-mailing list ye-Mede-l kwaye yenze i-intanethi ngu-Paul Halsall kwi-Medieval Sourcebook. Kwiincwadi ezihlola ukunyaniseka kwazo, bona iMithombo kunye nokuFunda okuPhakamileyo, ngezantsi.
Inqaku leKhokelo: Lo mbhalo wawufakwe kuqala ngoFebhuwari ka-2000, kwaye wahlaziywa ngoFebruwari ka-2007. Amanqaku
1 Njengokuba unamagama amaninzi ukusuka kwi-Middle Ages, uya kufumana zombini "Abelard" kunye ne "Heloise" ezenziwe ngeendlela ezahlukeneyo, kubandakanywa, kodwa akukho ndlela iphela: Abélard, Abeillard, Abailard, Abaelardus, Abelardus; Héloise, Hlose, Heloisa, Helouisa. Iifom ezisetyenziswe kule nkalo zonyulwa ngenxa yokuqonda kwabo kunye nokukhululeka kwazo kwenkcazo kwimida ye-HTML.
2 Izinto ezigqityiweyo kule maphepha zivela ku-Abelard's Historia Calamitatum ngaphandle kokuba kuchazwe ngenye indlela.
3 Ukususela kwiApologia yakwaAbelard .
4 Kwincwadi yokuqala yokuqala kaHeloise.
U-Abelard uqobo lwakhe ulapha apha kwiSayithi leMbali eliphakathi:
Historia Calamitatum, okanye, Ibali leMiphumo yam
Ukuguqulelwa ngu-Henry Adams Bellows, ngokusungulwa nguRalph Adams Cram. Ukunikezwa kwizahluko ezilishumi elinesihlanu, isingeniso, isingeniso nesihlomelo.
Imithombo kunye nokuFunda okuPhakanyisiweyo
Iikhonkco ezingezantsi ziya kukuthatha kwisiza apho unokuthelekisa amaxabiso kubathengisi beencwadi kwiwebhu. Ulwazi oluthe xaxa malunga nencwadi inokufunyanwa ngokuchofoza kwiphepha lencwadi kwenye yabathengisi be-intanethi.
iguqulelwe nguBetty Radice
Iqoqo le-Penguin classic of their correspondence.
Uhlalutyo lokubhala nokubhala lweencwadi ze-Abelard kunye ne-Heloise lijolise kumxholo ngamnye kunye neengqungquthela kunokuba kuboniswe ngokulandelelana kwexesha.
Ukuhlaziywa kwakhona komsebenzi ka-Abelard njengogqirha kunye nomfundisi.
I-akhawunti eqikelelweyo ibhaliwe kakuhle kwaye ichanile ngokuchanekileyo, kwaye iyenziwe kwifilimu efunyenwe kakuhle.
Ibali elithandanayo loLuthando yi-copyright © 2000-08 Melissa Snell kunye ne-About.com. Imvume inikezelwa ukuvelisa le nqaku kumntu okanye kwigumbi lokusebenzisa kuphela, ngaphandle kokuba i-URL engezantsi ifakiwe. Ukuze ufumane imvume yokuphinda uphinde ubhale, nceda uqhagamshelane noMelissa Snell.
I-URL yale mpawu yile:
Inqaku leKhokelo: Lo mbhalo wawufakwe kuqala ngoFebruwari ka-2000, kwaye wahlaziywa ngoFebruwari ka-2007.
Biography kaMalcolm X
Biography kaDaniel Ellsberg
Iimbali zeMeluleki eziMangalisa kwiimvini
I-Oklahoma City Bombing
I-Biography ye-Al Capone
Umzekelo wezenzi zeVerb Run
Mayelana neSizwe soLwazi lweSiqhwa kunye ne-Ice Data
I-Industrial Society: Inkcazo yezoLuntu
Indlela yokufunda uMatshini weSlot
Ukusebenzisa isenzi 'Esperar'
I-Horror Movie Remakes Round-Up
Ukulinganiswa kweRG kuchazwe